Ngaba Amanzi Adityanisiweyo Alungile Kwintlanzi - I-BikeHike
Ikhaya » Zomxube » Ngaba Amanzi Adityanisiweyo Alungile Kwintlanzi
Ngaba iintlanzi ziyakwazi ukuphila emanzini adiliweyo?
Ngawaphi amanzi alungele iintlanzi?
Ngawaphi amanzi asebhotileni akhuselekileyo kwiintlanzi?
Ngaba amanzi okusela acocekileyo akhuselekile kwiintlanzi?
Ngaba amanzi adibeneyo alungile kwintlanzi yegolide?
Ndingasebenzisa amanzi adibeneyo kwintlanzi ye-betta?
Ngaba amanzi entwasahlobo okanye amanzi adibeneyo angcono kwitanki yentlanzi?
Kuthatha ixesha elingakanani ukuba amanzi etephu akhuseleke kwiintlanzi?
Ngaba amanzi acociweyo okanye adibeneyo angcono?
Ngawaphi amanzi alungele intlanzi yegolide?
Ungasebenzisa amanzi asebhotileni kwitanki yeentlanzi?
Uwenza njani amanzi akhuseleke kwiintlanzi?
Ngaba amanzi acwecwe aneklorin?
Ndiwakhumbuza njani amanzi e-RO kwi-aquarium yam?
Ngaba amanzi adibeneyo alungile kwiitanki zamanzi anetyuwa?
Ngaba intlanzi yegolide ingahlala emanzini aneklorini?
Ngaba unako ukusela amanzi adibeneyo?
Asetyenziselwa ntoni amanzi adibeneyo?
Kufuneka ndilinde ixesha elingakanani ukuze ndibuyisele intlanzi yam etankini emva kokucoca?
Utshintsha kangaphi amanzi kwitanki yeentlanzi?
Loluphi uhlobo lwamanzi olufunwa yibetta fish?
Akufunekanga usebenzise amanzi adityanisiweyo kutshintsho lwamanzi kwitanki yakho yeentlanzi. Iintlanzi kunye nezityalo ngokufanayo zisebenzisa iiminerali emanzini, apho abantu banokufumana konke abakufunayo ekutyeni. Ayisiyiyo loo nto kuphela, kodwa iiminerali ziya kulawula kwaye ZIZINZISE amanqanaba e-pH emanzini. Nokuba i-pH ijika incinci inokuba yingozi kwiintlanzi.
Iitanki zeentlanzi akufanele zizaliswe ngamanzi adibeneyo ngenxa yokuba iiminerali ziyasuswa kuwo. Izimbiwa ezifana nentsimbi kunye nekhalsiyam zinceda intlanzi ichume. Ukongezelela, ngenxa yokuba iintlanzi zineembrane ezingenakukwazi ukuvunyelwa, intlanzi inokufumana ukwenzakala kumanzi acocekileyo, adityanisiweyo.
Imithombo yamanzi e-Aquarium yamanzi kaMasipala. Mhlawumbi eyona ndlela ilula yokubonelela intlanzi yakho ngekhaya elinamanzi kukuvula impompo. Kulungile Amanzi. Ukuba ikhaya lakho linamanzi omthombo, amanzi awayi kuba neklorini. Amanzi asebhotileni. Amanzi emvula. Mamanzi amisiwe. Reverse Osmosis (RO) Amanzi. I-Deionized (DI) Amanzi.
Qinisekisa ukuba amanzi awaxutywanga, awancitshisiwe, afakwe i-flavored okanye i-ionized. Kufuneka ifakwe ibhotile kumthombo, i-uncarbonated, amanzi endalo entwasahlobo. Amanzi abuyela umva i-osmosis asenokungakhuseleki kwiintlanzi kuba ayahluzwa, kwaye ezinye zezimbiwa ziya kube zikhutshiwe kwinkqubo.
Amanzi ahlanjululweyo okanye ahlambulukileyo, ahluke kakhulu kumanzi ompompo aqhelekileyo kuba acutshungulwe ukususa zonke iikhemikhali, iiminerali kunye nezondlo, akushiyi nto ngaphandle kwamanzi acocekileyo. Olu hlobo lwamanzi lwentlanzi ye-betta alukhuthazwa.
Ukubeka intlanzi yegolide kumanzi ompompo aneklorini, ibhotile okanye amanzi adibeneyo, okanye amanzi ane-acidic kakhulu okanye i-alkaline, inokubulala, utshilo uPonzio. I-Goldfish, amalungu entsapho ye-carp, ivelisa inkunkuma eninzi, ngoko uya kufuna inkqubo yokucoca. Inkunkuma iqulethe i-ammonia, eyityhefu kubo.
Awona manzi angcono onokuthi wongezwe kwitanki yakho ngamanzi etephu, ukuba nje ifakwe kwimeko yokuqala. Ukungaphumeleli oko, kufuneka uzame ukusebenzisa amanzi entwasahlobo. KUFUNEKA UHLALE uwaphephe amanzi acociweyo okanye adityanisiweyo, njengoko engenazo iiminerali eziyimfuneko kunye nezondlo ezifunwa yi-betta yakho ukuze uphile. Kudla ngokuba luncedo ukusebenzisa isongezo sedyasi yoxinzelelo.
Ukuba ufuna ukuhla ngalaa ndlela idistilled/RO iyakhethwa, kodwa oku kufuneka kuphinde kuhlaziywe. Ndiyingcali yebhayoloji yaselwandle kwaye ndilwenzile olu lingelo ngovavanyo lwetyhefu kwiintlanzi. Amanzi adiyiweyo ewodwa kwisikhongozeli esicoceke kakhulu aya kubulala iintlanzi ngokukhawuleza. Ayikokunqongophala kwezimbiwa ngokuthe ngqo.
Ngalo lonke ixesha vumela amanzi etephu ahlale iiyure ezingama-24 ukuze iklorini ibe nethuba lokumka. Okanye unokunyanga amanzi ngenye imichiza ukuba awukwazi ukulinda.
Amanzi acociweyo aqhele ukuba lukhetho olufanelekileyo kuba inkqubo yokuhlanjululwa isusa iikhemikhali kunye nokungcola emanzini. Akufuneki usele amanzi acocekileyo kuba engenazo iiminerali ezenzeka ngokwendalo, kubandakanya ikhalsiyam kunye nemagniziyam, eziluncedo empilweni.
I-Goldfish ziintlanzi zamanzi abandayo, okuthetha ukuba azifuni heater. I-Goldfish ikhetha amanzi ayo phakathi kwe-62 kunye ne-72 degrees Fahrenheit. Kwakhona, i-goldfish yenza kakuhle emanzini athambileyo, okuthetha ukuba i-alkalinity yayo iphezulu kune-asidi yayo. I-goldfish ikhula kakuhle xa ipH yamanzi iphakathi kwe-7.0 kunye ne-7.4.
Umzekelo, amanye amanzi asebhotileni asafuna ukususwa kweklorine. Kwaye ngenxa yokuba amanzi asebhotileni enzelwe ukuba siwasele, adla ngokubiza kakhulu kunokusebenzisa nje amanzi adiliweyo. Ndincoma kuphela ukusebenzisa amanzi asebhotileni njengamanzi etanki yeentlanzi kwimeko yongxamiseko, xa kungekho nto ikhoyo.
Abagcini beentlanzi banokwenza amanzi etephu akhuseleke kwiintlanzi zabo ngokuwanyanga kwangaphambili ngesilungisi samanzi elulwelo, esifumaneka kwivenkile ehlala emanzini okanye kwivenkile yezilwanyana zasekhaya. Khetha imveliso efana ne-StressCoat (eyenziwe yi-API) ethi ikhuphe ityhefu ngoko nangoko zombini iklorin kunye nekloramine kunye nokubophelela naziphi na iintsimbi ezinzima.
Ngaba amanzi adibeneyo aneklorin? Ukuyibeka ngokulula, HAYI! I-Durastill Distilled Amanzi AKUMVA iklorin. Kodwa idistillation yamanzi ekumgangatho ophantsi ayikwazanga ukususa ngokufanelekileyo kunye nokucoca iklorine.
Umxube we-calcium chloride, ityuwa ye-Epsom, kunye nesoda yokubhaka wenza imimangaliso ukukhumbuza amanzi e-RO kwitanki yakho yeentlanzi. Ukuze ufumane indlela elungelelanisiweyo, sicebisa ukuba ufakele iikhatriji zokubuyisela iminerali kwitanki yakho.
Ingxaki ngamanzi anedistilled kukuba acoceke kakhulu kwizinto eziphila elwandle. Kuyavela ukuba iintlanzi zidinga ngaphezu kwehydrogen kunye neoksijini kwiimolekyuli ukuze ziphile. Oku kuthetha ukuba kufuneka ugweme ukusebenzisa amanzi adibeneyo, ngakumbi xa uguqula amanzi kwi-aquarium yakho yetyuwa.
Iklorini ichithakala ngoko nangoko emva kokuvezwa emoyeni kwaye ikloramine/iammonia ifunxa kumajelo eendaba amalahle kwisihluzo sakho. Iintlanzi zakho zilungile kwaye kufuneka ziphile ubomi obude ngokhathalelo olufanelekileyo. I-Goldfish ingaphila iminyaka engaphezu kwe-10 (i-avareji) ekuthinjweni. Enyanisweni, eyona nto indala yayineminyaka engama-43 ubudala.
Amanzi adibeneyo akhuselekile ukusela. Kodwa uya kuyifumana iflethi okanye i-bland. Kungenxa yokuba ihluthwe iiminerali ezibalulekileyo ezinje ngecalcium, isodiyam, kunye nemagniziyam enika amanzi etephu ukungcamla okuqhelekileyo. Okushiyekileyo yi-hydrogen kunye neoksijini kwaye ayikho enye into.
Ukusetyenziswa kwamanzi adiyiweyo kukwabandakanya ukwenza iityhubhu zomkhenkce, isuphu, ikofu, iti, ipasta, irayisi, ubisi olungumgubo, iijusi, iKool-Aide®, okanye nje amanzi okusela asempilweni. Ngelishwa, ungcoliseko olufunyenwe kumanzi ompompo lusafumana indlela eya emzimbeni wakho ngaphandle kokuba uhlala usebenzisa amanzi acocekileyo adiliweyo.
Ukuba akukho nto ingako itshintshileyo kwi-aquarium, ungabuyisela intlanzi yakho kwiiyure ezingama-24 emva kokuba ubeke zonke izixhobo, umhombiso, kunye nezityalo etankini.
Kufuneka wenze i-25% yokutshintsha amanzi rhoqo kwiiveki ezimbini ukuya kwezine. Akukho sizathu sokususa iintlanzi ngexesha lokutshintsha kwamanzi. Qinisekisa ukuba uvuselela igrabile okanye usebenzise isicoci segrabile ngexesha lokutshintsha kwamanzi. Xa uphinda ufaka amanzi kwi-aquarium, sebenzisa iTetra AquaSafe® ukususa iklorine kunye nekloramine.
Intlanzi yeBetta iya kuphumelela emanzini ane-pH "engathathi hlangothi" ejikeleze i-7.0. Uninzi lwe-pH yamanzi epompo luya kuwela phakathi koluhlu lwe-6.5 ukuya kwi-7.5. Kulula ukunyenyisa iqondo lobushushu ngokuthe ngqo ngaphandle kwetephu ukuya kolona luhlu lulungileyo lwentlanzi yakho.
Ngaba aDistilled Amanzi Alungile Kwintlanzi yeBetta
Impendulo eKhawulezayo: Ngaba iintlanzi ziyakwazi ukuphefumla kumanzi adityanisiweyo
Ngaba Amanzi aneDistilled akhuselekile kwiintlanzi
Impendulo eKhawulezayo: Ngaba Kulungile Ukunika Izinja Amanzi adityanisiweyo
Impendulo eKhawulezayo: Ngaba Izinja Zingasela Amanzi Adityanisiweyo
Ngaba izinja zinamanzi adityanisiweyo
Ngaba Kulungile Ukunika Inja Yakho Amanzi Afakwe Amanzi
Umbuzo: Ngaba Intlanzi Inokuhlala Kumanzi Adityanisiweyo
Ngaba iintlanzi zeBetta ziyakwazi ukusinda kumanzi adityanisiweyo
Ngaba Amanzi aneDistilled angasetyenziselwa iintlanzi
Umbuzo: Ngaba Unokusebenzisa Amanzi Adityanisiweyo Kwintlanzi
Umbuzo: Ngaba Amanzi Adityanisiweyo Alungile Kwintlanzi yeBetta
Post Previous: Umbuzo: Kufuneka Ukufudumala Kangakanani Amanzi Eentlanzi zeBetta